पुरुषको तुलनामा महिलामा टाउको दुख्ने समस्या बढी देखिन्छ किन ? – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /Intresting/पुरुषको तुलनामा महिलामा टाउको दुख्ने समस्या बढी देखिन्छ किन ?
पुरुषको तुलनामा महिलामा टाउको दुख्ने समस्या बढी देखिन्छ किन ?
पुरुषको तुलनामा महिलामा टाउको दुख्ने समस्या बढी देखिने गरेको पाइएको छ । हालै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सार्वजनिक गरेको (स्टेप्स सर्वे) सर्वेक्षण प्रतिवेदनले पुरुषको तुलनामा महिलामा करिब दोब्बर नै टाउको दुख्ने समस्या बढी देखिएको हो । सर्वेक्षणअनुसार १० दशमलव ७ प्रतिशत पुरुषमा गम्भीररुपमा टाउको दुख्ने समस्या देखिने गरेको छ भने महिलामा १९ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ ।
परिषदले देशभरका १५ देखि ६९ वर्ष उमेर समूहका पाँचहजार ५९३ जनामा सर्वेक्षण गरेको थियो । जसमा १५ दशमलव २ प्रतिशत नेपालीमा गम्भीर रुपमा टाउको दुख्ने समस्या देखिएको थियो । त्यसैगरी सो सर्वेक्षण प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी टाउको दुखाइको समस्या सुदूरपश्चिम प्रदेशका मानिसमा देखिन्छ । जसमा २३ दशमलव ४ प्रतिशत देखिएको थियो । दोस्रोमा नम्बरमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ ।
जसमा २२ दशमलव ७ प्रतिशतमा टाउको दुख्ने समस्या देखिएको छ । क्रमशः तेस्रो नम्बरमा प्रदेश नम्बर ५ रहेको छ । जसमा १७ दशमलव २ प्रतिशत गम्भीर टाउको दुखाइ देखिएको हो । प्रदेश ३ मा १३ दशमलव ८, गण्डकी प्रदेशमा १२ दशमलव ९ प्रतिशत, प्रदेश १ मा १२ दशमलव २ र प्रदेश २ मा १० दशमलव ९ प्रतिशतमा टाउको दुख्ने समस्या देखिएको छ ।
परिषदले सर्वेक्षण गत फेब्रुअरीदेखि मेसम्म गरेको थियो । उक्त सर्वेक्षण हरेक ५–५ वर्षको अन्तरालमा गर्दै आएको छ । त्यस्तै न्युरो सर्जन डा. गोपालरमण शर्माले मस्तिष्कको आवरण, धमनी र मांसपेशीमा हुने पीडा नै टाउको दुख्नु हो । जुन विभिन्न रोगका कारणसमेत हुने बताए ।
यदी सामान्य खालको टाउको दुखेको छ भने
सलमानसँगै सनी लियोनीको पनि चर्चा, कारण यस्तो